Love Archives - Shwe Khit
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျနဲ့ ခဈြမှ စိတျဝငျစားမိတယျဆိုပမေယျ့လညျး လူ့သဘာဝအရ စိတျဝငျစားမိတယျဆိုတာမြိုး ဖွဈစတေဲ့ အခကျြတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။
အနနေီးရငျ ခဈြမိသှားတတျကွတယျဆိုတာလညျး ဒီသဘောပါပဲ။ကောငျလေးတှကေ ကိုယျ့ကို ကွိုကျအောငျ ကွိုးစားအားထုတျကွသလို ကောငျမလေးတှကေလညျး ကောငျလေးတှေ ကိုယျ့ကို ကွိုကျအောငျ လုပျတာမြိုးတှေ ရှိနပေါတယျ။
စနှိုကျကွျောတှလေညျး ပေါမြားလာတဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဘယျလိုဆှဲဆောငျမှုလေးတှကေ ကောငျလေးတှဆေီက စိတျဝငျစားမှုကို ရသှားစလေဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျနျော။
အကွညျ့ခငျြးဆုံရငျ ရငျခုနျသညျလို့တောငျ ဆိုစကားတှေ ရှိထားပါတယျ။ တကယျလညျး ခဈြမှုရေးရာမှာ အကွညျ့တဈခကျြကလညျး အရေးပါနပေါတယျ။ကိုယျ့ကို စိတျဝငျစားတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါနတေဲ့ မကျြလုံးမြိုးကို ဘယျယောင်ျကြားလေးမှ မခံနိုငျကွပါဘူး။
အမွဲလိုလို သူ့ကို စိတျဝငျစားနတေယျဆိုတဲ့ အကွညျ့မြိုးနဲ့ မကျြလုံးခငျြး မကွာခဏ ဆုံပွီဆိုရငျတော့ သူတို့ကိုယျ သူတို့ မသိလိုကျခငျမှာပဲ တဈဖကျ ကောငျမလေးရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုအောကျကို ကရြှုံးသှားတတျကွပါတယျ။
လူနှဈယောကျက ပုံမှနျထကျပိုတဲ့ အဆငျ့တဈခုကို ရောကျဖို့ဆိုရငျ ထိတှမှေု့တှကေို ခံစားမိဖို့လညျး လိုပါတယျ။
ကောငျမလေးတှအေနနေဲ့ ကောငျလေးတှကေို မသိလိုကျတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဟနျမြိုးနဲ့ လကျကို ဖမျးဆှဲလိုကျတာမြိုး၊ ပုခုံးကို ထိမိသှားတာမြိုး၊ အသားခငျြး ထိမိနတောမြိုး စတာတှေ ကောငျလေးတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ အခကျြတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ဒီလို နီးစပျမှု မြားသှားရငျ ကောငျလေးတှကေ အဲ့ဒီကောငျမလေးကို စိတျယိုငျသှားတတျကွပါတယျ။
အလှဆုံး ပွုံးလိုကျတဲ့အခါမြိုးကို လူတျောတျောမြားမြား ငေးမကွညျ့ဘဲ မနနေိုငျတတျကွပါဘူး။ အပွုံးတဈခုရဲ့ စှမျးအားက အဲ့လောကျ ကွီးပါတယျနျော။
ဒါကွောငျ့ ကောငျမလေးတှကေ သူတို့ စိတျဝငျစားတဲ့ ကောငျလေးကို ပွုံးပွတာမြိုး လုပျတတျကွပါတယျ။ကွညျကွညျလငျလငျ လှလှပပလေး ကိုယျ့ကို ပွုံးပွပွီး ကိုယျ့ကို စိတျဝငျစားနတေဲ့ အကွညျ့လေးပါ ရှိနရေငျတော့ ကောငျလေးတှကေ လုံးဝ ယိုငျလဲသှားတတျကွပါတယျ။
ကောငျလေးအမြားစုက ကိုယျ့ကောငျမလေးကို ဆံပငျအရှညျထားစခေငျြတာမြိုး၊ ဆံပငျပုံစံ လှလှလေး ရှိနစေခေငျြတာမြိုးကို သိကွမှာပါ။ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဆံပငျက ကောငျလေးအခြို့ရဲ့ အားနညျးခကျြ ဖွဈနတေတျပါတယျ။
ကိုယျ့ကို အနညျးငယျ စိတျဝငျစားမှု ရှိနတောမြိုးနဲ့ ကိုယျကွိုကျနတေဲ့ ကောငျလေးရှမှေ့ာ ဆံပငျတှကေို မသိမသာကိုငျပွီး ဆော့နတောမြိုး၊ ဆံပငျတှကေို ပုံစံ ခတြဲ့အနနေဲ့ ပွုလုပျတာမြိုးဆိုရငျ ကောငျလေးတှကေ စိတျလှုပျရှားသှားစနေိုငျပါတယျ။လှလှလေးပွုံးပွီး ဆံပငျတှကေို ကစားနရေငျ ပိုလို့တောငျ သူတို့က သငျ့ကို စိတျထဲကနေ သဘောကမြိသှားစနေိုငျပါသေးတယျ။
လူတဈယောကျကို တဈယောကျ အမှတျရဖို့က အနံ့က ထိပျဆုံးမှာ ပါဝငျနပေါတယျ။ကိုယျသငျးရနံ့ဆိုတာ လူတဈယောကျမှာ ရှိကို ရှိနတေဲ့ အရာ ဖွဈပွီး တဈခြို့ကတော့ ကိုယျသငျးရနံ့ကို အမှေးနံ့ တဈခုခု ဖွဈနအေောငျ ပွုလုပျထားတတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျသုံးနကြေ ရမှေေးကို သူနဲ့ တှတေို့ငျး စှတျတာမြိုးကလညျး ကိုယျ့ကို သူ့စိတျထဲ စှဲနစေမေိမယျ့ အခကျြပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကောငျလေးတှဆေိုတာ အလှကွိုကျတယျဆိုတာကို တျောတျောမြားမြား သိပွီးသားပါ။ဒါကွောငျ့ ကြော့ရှငျးလှပနတေဲ့ မိနျးကလေးမြိုးဆိုရငျ ကောငျလေးတှကေ မကွညျ့ဘဲ မနနေိုငျတတျကွပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ သနျ့ရှငျး လနျးဆနျးပွီး လှပနတေဲ့ အပွငျ အပွုအမူတှပေါ သိမျမှတေ့ယျဆိုရငျ ကောငျလေးတှကေ စိတျဝငျစားမှုက အပွညျ့ရှိနတေတျပါတယျ။
ကောင်လေးတွေ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၆) မျိုး
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်မှ စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လူ့သဘာဝအရ စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
အနေနီးရင် ချစ်မိသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ကောင်လေးတွေက ကိုယ့်ကို ကြိုက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသလို ကောင်မလေးတွေကလည်း ကောင်လေးတွေ ကိုယ့်ကို ကြိုက်အောင် လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။
စနှိုက်ကြော်တွေလည်း ပေါများလာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုလေးတွေက ကောင်လေးတွေဆီက စိတ်ဝင်စားမှုကို ရသွားစေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
အကြည့်ချင်းဆုံရင် ရင်ခုန်သည်လို့တောင် ဆိုစကားတွေ ရှိထားပါတယ်။ တကယ်လည်း ချစ်မှုရေးရာမှာ အကြည့်တစ်ချက်ကလည်း အရေးပါနေပါတယ်။ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါနေတဲ့ မျက်လုံးမျိုးကို ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ မခံနိုင်ကြပါဘူး။
အမြဲလိုလို သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ မျက်လုံးချင်း မကြာခဏ ဆုံပြီဆိုရင်တော့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ မသိလိုက်ခင်မှာပဲ တစ်ဖက် ကောင်မလေးရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအောက်ကို ကျရှုံးသွားတတ်ကြပါတယ်။
လူနှစ်ယောက်က ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ဖို့ဆိုရင် ထိတွေ့မှုတွေကို ခံစားမိဖို့လည်း လိုပါတယ်။
ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ ကောင်လေးတွေကို မသိလိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ရိုးသားတဲ့ ဟန်မျိုးနဲ့ လက်ကို ဖမ်းဆွဲလိုက်တာမျိုး၊ ပုခုံးကို ထိမိသွားတာမျိုး၊ အသားချင်း ထိမိနေတာမျိုး စတာတွေ ကောင်လေးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို နီးစပ်မှု များသွားရင် ကောင်လေးတွေက အဲ့ဒီကောင်မလေးကို စိတ်ယိုင်သွားတတ်ကြပါတယ်။
အလှဆုံး ပြုံးလိုက်တဲ့အခါမျိုးကို လူတော်တော်များများ ငေးမကြည့်ဘဲ မနေနိုင်တတ်ကြပါဘူး။ အပြုံးတစ်ခုရဲ့ စွမ်းအားက အဲ့လောက် ကြီးပါတယ်နော်။
ဒါကြောင့် ကောင်မလေးတွေက သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်လေးကို ပြုံးပြတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ကြည်ကြည်လင်လင် လှလှပပလေး ကိုယ့်ကို ပြုံးပြပြီး ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အကြည့်လေးပါ ရှိနေရင်တော့ ကောင်လေးတွေက လုံးဝ ယိုင်လဲသွားတတ်ကြပါတယ်။
ကောင်လေးအများစုက ကိုယ့်ကောင်မလေးကို ဆံပင်အရှည်ထားစေချင်တာမျိုး၊ ဆံပင်ပုံစံ လှလှလေး ရှိနေစေချင်တာမျိုးကို သိကြမှာပါ။ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆံပင်က ကောင်လေးအချို့ရဲ့ အားနည်းချက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို အနည်းငယ် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေတာမျိုးနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးရှေ့မှာ ဆံပင်တွေကို မသိမသာကိုင်ပြီး ဆော့နေတာမျိုး၊ ဆံပင်တွေကို ပုံစံ ချတဲ့အနေနဲ့ ပြုလုပ်တာမျိုးဆိုရင် ကောင်လေးတွေက စိတ်လှုပ်ရှားသွားစေနိုင်ပါတယ်။လှလှလေးပြုံးပြီး ဆံပင်တွေကို ကစားနေရင် ပိုလို့တောင် သူတို့က သင့်ကို စိတ်ထဲကနေ သဘောကျမိသွားစေနိုင်ပါသေးတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အမှတ်ရဖို့က အနံ့က ထိပ်ဆုံးမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ကိုယ်သင်းရနံ့ဆိုတာ လူတစ်ယောက်မှာ ရှိကို ရှိနေတဲ့ အရာ ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ်သင်းရနံ့ကို အမွှေးနံ့ တစ်ခုခု ဖြစ်နေအောင် ပြုလုပ်ထားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်သုံးနေကျ ရေမွှေးကို သူနဲ့ တွေ့တိုင်း စွတ်တာမျိုးကလည်း ကိုယ့်ကို သူ့စိတ်ထဲ စွဲနေစေမိမယ့် အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်လေးတွေဆိုတာ အလှကြိုက်တယ်ဆိုတာကို တော်တော်များများ သိပြီးသားပါ။ဒါကြောင့် ကျော့ရှင်းလှပနေတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဆိုရင် ကောင်လေးတွေက မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်တတ်ကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် သန့်ရှင်း လန်းဆန်းပြီး လှပနေတဲ့ အပြင် အပြုအမူတွေပါ သိမ်မွေ့တယ်ဆိုရင် ကောင်လေးတွေက စိတ်ဝင်စားမှုက အပြည့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။
January 22, 2022 by Zaw Hein
ခြူံမွငျတိုငျး တိုးခငျြ နကွေတဲ့ ခဈြသူ စုံတှဲမြား ဖတျကွညျ့ပေးပါ သူတို့ဖတျရအောငျ ရှဲပေး လိုကျကွပါ
မောငျတို့ .. မယျတို့ .. အနနေဲ့ လူငယျ သဘာဝ ခြိနျးဆို တှဆေုံ့ခှငျ့ အပွညျ့အဝ ကိုယျစီ ရှိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျခဈြရတဲ့ သူကို လူသူ အသှားအလာ ပွတျတဲ့ ခြုံကွို ခြုံကွား နရောတှမှော ချေါမသှား သငျ့ဘူး။
ခြုံတိုးပွီး ခြိနျးတှတေဲ့ စုံတှဲ အခဈြက ခြုံတိုး စုံတှဲအခဈြဘဲ ဖွဈမယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူကို ကိုယျတနျးဖိုးထား မွတျနိုးရာ မရောကျဘူး
အခဈြအကွောငျးကို စဉျးစား လာကွပွီ ဆိုရငျ လူကွီးလူကောငျး ဆနျဆနျ အိန်ဒွရေရ ခြိနျးတှေ့ ကွပါ။ ရပါ၏။
နောကျပွီး မောငျတို့ မယျတို့ဟာ .. တိုငျးပွညျရဲ့ အနာဂတျ ကွယျပှငျ့မြား ဖွဈတာကွောငျ့ အခု ကတညျးက အဆငျ့အတနျး ရှိရှိ တှေးချေါ မြှျောမွငျ တတျတဲ့ အလအေ့ထ ကောငျးမြားကို မှေးမွု လကေ့ငျြ့ကွ ရမယျ။
ကိုယျ့ဆန်ဒ တခုတညျးကို ရှတေ့နျးတငျပွီး ခြုံတိုးလို့ ခြိနျးဆို တှကွေ့တဲ့ အတနျးအစား ထဲမှာ မောငျတို့ မယျတို့ မပါစေ ခငျြဘူး။
ခြုံတိုးပွီး စုံဖကျသှားတဲ့ အတှဲ ဆိုတာ ဘယျတော့မှ တညျတနျ့ သှားတယျ ဆိုတာ မရှိပါဘူး..။
ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ … နှဈဦး နှဈဘကျ စလုံးဟာ ခြုံမွငျလငျြ တိုးခငျြ ကွလို့ဘဲ ဖွဈတယျ။
အဲ့ဒီလို ခြုံမွငျတိုး စုံတှဲတှကေို ပဈမှတျထားပွီး လူသတျ လုယကျနတေဲ့ ဒုစရိုကျ သမားမြား ရှိနတေယျ။
တက်ကသိုလျ စုံတှဲမြားကို ဓားထောကျ တိုကျခိုကျပွီး ပစ်စညျးလုယကျမှု မြားကွောငျ့ ကြောငျးသား အခြို့ အသကျ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဖွဈစဉျတှေ အမြားအပွား ရှိပါတယျ။
အသကျမသေ ဘဲ နာကငျြ ဒဏျရာ ရခဲ့တဲ့ စုံတှဲမြား ကတော့ မကွာ မကွာဘဲ
တခြို့စုံတှဲတှဆေို အသကျ ဆုံးခဲ့တယျ တခြို့ စုံတှဲမြား ကတော့ ပစ်စညျးတှေ ပါပွီး လူတှကေ နာလို့ ကနျြခဲ့တယျ
မောငျတို့ … မယျတို့သာ ခြုံမတိုးဘူး ဆိုရငျ ဒီလိုပွသနာက ဖွဈလာစရာ အကွောငျး မရှိဘူး။
ထိုငျရှကျရမဲ့ ကိစ်စက အမှုအခငျးဖွဈတော့ ထပွီး ရှကျကွရတယျ ..။ ထိုငျပွီး ရှကျရမဲ့ ကိစ်စကို ထပွီး မရှကျခငျြဘူး ဆိုရငျ မောငျတို့ မယျတို့ ခြုံမွငျတိုငျး မတိုးကွ ပါနဲ့။
မောငျရငျးနှမလို စိတျသဘော ထားပွီး ပွောခွငျး ဖွဈပါတယျ ..။
ချူံမြင်တိုင်း တိုးချင် နေကြတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲများ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ သူတို့ဖတ်ရအောင် ရှဲပေး လိုက်ကြပါ
မောင်တို့ .. မယ်တို့ .. အနေနဲ့ လူငယ် သဘာဝ ချိန်းဆို တွေ့ဆုံခွင့် အပြည့်အဝ ကိုယ်စီ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူကို လူသူ အသွားအလာ ပြတ်တဲ့ ချုံကြို ချုံကြား နေရာတွေမှာ ခေါ်မသွား သင့်ဘူး။
ချုံတိုးပြီး ချိန်းတွေ့တဲ့ စုံတွဲ အချစ်က ချုံတိုး စုံတွဲအချစ်ဘဲ ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်တန်းဖိုးထား မြတ်နိုးရာ မရောက်ဘူး
အချစ်အကြောင်းကို စဉ်းစား လာကြပြီ ဆိုရင် လူကြီးလူကောင်း ဆန်ဆန် အိနြေ္ဒရရ ချိန်းတွေ့ ကြပါ။ ရပါ၏။
နောက်ပြီး မောင်တို့ မယ်တို့ဟာ .. တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ကြယ်ပွင့်များ ဖြစ်တာကြောင့် အခု ကတည်းက အဆင့်အတန်း ရှိရှိ တွေးခေါ် မျှော်မြင် တတ်တဲ့ အလေ့အထ ကောင်းများကို မွေးမြု လေ့ကျင့်ကြ ရမယ်။
ကိုယ့်ဆန္ဒ တခုတည်းကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ချုံတိုးလို့ ချိန်းဆို တွေ့ကြတဲ့ အတန်းအစား ထဲမှာ မောင်တို့ မယ်တို့ မပါစေ ချင်ဘူး။
ချုံတိုးပြီး စုံဖက်သွားတဲ့ အတွဲ ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ တည်တန့် သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး..။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ … နှစ်ဦး နှစ်ဘက် စလုံးဟာ ချုံမြင်လျင် တိုးချင် ကြလို့ဘဲ ဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီလို ချုံမြင်တိုး စုံတွဲတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လူသတ် လုယက်နေတဲ့ ဒုစရိုက် သမားများ ရှိနေတယ်။
တက္ကသိုလ် စုံတွဲများကို ဓားထောက် တိုက်ခိုက်ပြီး ပစ္စည်းလုယက်မှု များကြောင့် ကျောင်းသား အချို့ အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။
အသက်မသေ ဘဲ နာကျင် ဒဏ်ရာ ရခဲ့တဲ့ စုံတွဲများ ကတော့ မကြာ မကြာဘဲ
တချို့စုံတွဲတွေဆို အသက် ဆုံးခဲ့တယ် တချို့ စုံတွဲများ ကတော့ ပစ္စည်းတွေ ပါပြီး လူတွေက နာလို့ ကျန်ခဲ့တယ်
မောင်တို့ … မယ်တို့သာ ချုံမတိုးဘူး ဆိုရင် ဒီလိုပြသနာက ဖြစ်လာစရာ အကြောင်း မရှိဘူး။
ထိုင်ရှက်ရမဲ့ ကိစ္စက အမှုအခင်းဖြစ်တော့ ထပြီး ရှက်ကြရတယ် ..။ ထိုင်ပြီး ရှက်ရမဲ့ ကိစ္စကို ထပြီး မရှက်ချင်ဘူး ဆိုရင် မောင်တို့ မယ်တို့ ချုံမြင်တိုင်း မတိုးကြ ပါနဲ့။
မောင်ရင်းနှမလို စိတ်သဘော ထားပြီး ပြောခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ..။
January 21, 2022 by Zaw Hein
လှတဲ့သူကို ကွညျ့တာ ဘာထူးဆနျးvလဲလို့ ပွောကွလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လှတဲ့သူတှလေညျး လူပါပဲ။ အမွဲ ကိုယျဘာလုပျလုပျ လူတှကေ စိတျဝငျစားပွီး ပွောဆိုနရေတာ သူတို့အတှကျတော့ အမွဲ ကွုံနလေို့ လူစိတျဝငျစားတာကို မနှဈသကျ ကွပါ ဘူး။
ကိုယျ့ကို ခဈြတဲ့သူ အားလုံးကို ကိုယျ ပွနျမခဈြနိုငျတော့ အားနာရသလို စိတျလညျး ရှုပျရပါတယျ။ ကိုယျ့ဘကျက ခငျရသူတှေ ကအစကိုယျ့ကို ခဈြတယျလို့ ပွောလာတဲ့ အခါမြိုးမှာ ကိုယျ့မှာ မိတျဆှေ ဆုံးရှုံးရ မလား ဆိုပွီး တှေးပူပွီး အားနာနေ ရတာ လညျး သိပျကို ပငျပနျးတတျကွပါတယျ။
ရုပျခြောတာကလညျး ကိုယျ ရှေးခယျြလို့ ရတဲ့ အရာမဟုတျပါဘူး။ ရုပျခြောတာကွောငျ့ ခဈြသူ မြားသလို မုနျးသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ရုပျကလေးကို ဗနျးပွပွီး ဆိုပွီး ပွောတတျလို့လညျး စိတျတိုရ ဒေါသဖွဈရပါသေးတယျ။
လှတဲ့ မိန်းကလေးတွေပဲ ကြုံနေရတဲ့ နေ့စဉ် အခက်အခဲလေးများ
အလှအပကို လူတိုင်းက သဘောကျ တတ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် လှတာ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆနေပေမယ့် တကယ်တော့ လှတာက မကောင်းဘူးလို့ တွေးသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အများအမြင်မှာ လှတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကတော့ လှတာကြောင့် အခက်အခဲတွေကို နေ့စဉ် ခံစားနေရပါတယ်။ သူတို့ ကြုံနေရတာတွေ ကတော့….
(၁) လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခံရလွန်းတယ်
လှတဲ့သူကို ကြည့်တာ ဘာထူးဆန်းvလဲလို့ ပြောကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လှတဲ့သူတွေလည်း လူပါပဲ။ အမြဲ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် လူတွေက စိတ်ဝင်စားပြီး ပြောဆိုနေရတာ သူတို့အတွက်တော့ အမြဲ ကြုံနေလို့ လူစိတ်ဝင်စားတာကို မနှစ်သက် ကြပါ ဘူး။
လက်လှုပ် ခြေလှုပ်က အစ လိုက်ကြည့်တာ ခံနေရတာက သူတို့ကို အနေကြုံ့စေပါတယ်။ ကိုယ့်ကို လိုက်ကြည့်နေ သူတွေကို လျစ်လျူရှုတဲ့ သူတွေ လည်း ရှိပေမယ့် အမြဲတစေ သတိထားခံနေရတော့ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှု ပျောက်ဆုံးနေတာ သူတို့ပဲ သိပါတယ်။
လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားခံ ကြရတဲ့ သူတွေ ကတော့ သူများထက် ပိုပြီး အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရပါတယ်။ လက်လှုပ် လက်ပြော ပါးစပ်လှုပ် ပါးစပ် အပြောခံရတာမို့ အမြဲ သတိထားနေရတာကလည်း သူတို့အတွက် စိတ်ရှုပ် စရာပါပဲ။
လွတ်လပ်မှုလည်း မရှိ၊ ချဉ်းကပ် သူတွေ ကလည်း များဆိုတော့ သူတို့က အမြဲ စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။ လူတွေက စိတ်ဝင်စားနေ ကြတာ ကိုက သူတို့အတွက် စိတ်ရှုပ်စရာ ဖြစ်နေရတာပါပဲ။
ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ သူတွေ များတာ ပျော်စရာပေမယ့် ချစ်တဲ့သူတွေ များနေတာက အန္တရာယ်လည်း ဖြစ်စေသလို သတိထား စရာလည်း များပါတယ်။
ကိုယ်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုပိုသာသာ ဆက်ဆံဖြစ်ရင်တောင် မကောင်းဖြစ်တတ်သလို ချစ်ခွင့်ပန်နေတာကို ဖြေရှင်းရတာ နားထောင်ရတာလည်း အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူ အားလုံးကို ကိုယ် ပြန်မချစ်နိုင်တော့ အားနာရသလို စိတ်လည်း ရှုပ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ခင်ရသူတွေ ကအစကိုယ့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်မှာ မိတ်ဆွေ ဆုံးရှုံးရ မလား ဆိုပြီး တွေးပူပြီး အားနာနေ ရတာ လည်း သိပ်ကို ပင်ပန်းတတ်ကြပါတယ်။
ရုပ်ချောတာကလည်း ကိုယ် ရွေးချယ်လို့ ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ချောတာကြောင့် ချစ်သူ များသလို မုန်းသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ရုပ်ကလေးကို ဗန်းပြပြီး ဆိုပြီး ပြောတတ်လို့လည်း စိတ်တိုရ ဒေါသဖြစ်ရပါသေးတယ်။
ပြိုမတေို့ ထငျမထားမယျ့ ဒီအခကျြလေးတှကေ ပုရိသတှကေို အဓိကဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ
အမြိုးသားတဈယောကျနဲ့ စတှတှေ့ခေ့ငျြးမှာ အမြိုးသားတှရေဲ့ အာရုံကို ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ အရာတှကေ ဒါတှပေါ။
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ထူထဲတောကျပတဲ့ ဆံပငျရှညျတှကေ ကောငျလေးတှရေဲ့ အာရုံကိုဖမျးစားနိုငျဆုံးပါ။ တောကျပတဲ့ဆံပငျရှညျလေးတှရှေိတယျဆိုတာ အဲ့ဒီမိနျးကလေးရဲ့ စိတျရှညျမှုနဲ့ ကနျြးမာသနျစှမျးမှုကွောငျ့လို့ သူတို့က ယူဆပါတယျတဲ့။
အနံ့အသကျ ကောငျးကောငျးလေးတှကေ စိတျအာရုံကို လနျးဆနျးစပွေီး ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ကောငျးတဲ့ဟျောမုနျးတှကေိုထုတျလုပျပေးနိုငျတယျ ဆိုတာကို သိတဲ့လူ ရှားပါတယျ။ အဲ့ဒါကို မသိရငျ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ကိုယျသငျးနံ့က အမြိုးသားတဈယောကျရဲ့ စိတျအာရုံကို ဒုတိယဆှဲဆောငျနိုငျဆုံးလို့ပွောရငျ အံ့သွမိမှာပါ။
ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျအလှမြိုးထကျ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ပွပွေဈတဲ့မကျြနှာပုံစံက အမြိုးသားတှကေို ပိုဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ မကျြနှာအနအေထားပွပွေဈရငျ စိတျဓာတျလညျးကောငျးတယျလို့ သူတို့စိတျကထငျကွပါတယျတဲ့။
အပွုံးလှလှလေးတှကေ လူတဈယောကျရဲ့ အာရုံတှကေို ဖမျးစားနိုငျတယျလို့ သိပွီးသား မဟုတျလား။ တကယျတော့ အပွုံးလှတာထကျ သှားလှတာကမှ အဓိပါတဲ့နျော။ သှားဖွူဖွူလေးတှကေို အမြိုးသားတှကေ အရမျးသဘောကပြါတယျ။
လကျမောငျး ရှညျရှညျသှယျသှယျလေးတှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မျောဒယျမမတှကေို အမြိုးသားတှေ သိပျကိုကွှကွေပါတယျ။ ပွီးတော့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ လကျမောငျးရှညျရှညျလေးတှကေ သူတို့တှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျလို့ အမြိုးသားအမြားစုက ဝနျခံထားကွပါတယျ။
မိနျးကလေးပီပီသသ အိညှကျအိညှကျပွောတဲ့ အသံလေးတှကေို ကောငျလေးတှေ ကွှကွေတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ လူကကောငျသေးပွီး အသံကယျြကယျြမိနျးကလေးမြိုးက သူတို့ကို ပိုဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျတဲ့။
ါကတော့ ပွောစရာမလိုတော့တဲ့ အရာပါပဲ။ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ကောကျကွောငျးကို လိုကျမကွညျ့တဲ့ ယောကျြားလေးဆိုတာ ရှိကို,မရှိတာပါ။ ပွီးတော့ ကောကျကွောငျးလှတဲ့ မိနျးကလေးတှကေို မကွိုကျတဲ့သူရောရှိပါ့မလား။ ကောကျကွောငျးလှလှလေးတှကေ သူတို့ကို လုံးဝဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။
crush နဲ့သှားတှရေ့ငျ အနီရောငျသာဝတျသှားလို့ ပွောပါရစေ။ အနီရောငျဝတျထားတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက ယောကျြားလေးတဈယောကျရဲ့ အာရုံကို သခြောပေါကျဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။
အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ စတွေ့တွေ့ချင်းမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အရာတွေက ဒါတွေပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ထူထဲတောက်ပတဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေက ကောင်လေးတွေရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ဆုံးပါ။ တောက်ပတဲ့ဆံပင်ရှည်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ စိတ်ရှည်မှုနဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကြောင့်လို့ သူတို့က ယူဆပါတယ်တဲ့။
အနံ့အသက် ကောင်းကောင်းလေးတွေက စိတ်အာရုံကို လန်းဆန်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကို သိတဲ့လူ ရှားပါတယ်။ အဲ့ဒါကို မသိရင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့က အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဒုတိယဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလို့ပြောရင် အံ့သြမိမှာပါ။
ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်အလှမျိုးထက် မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပြေပြစ်တဲ့မျက်နှာပုံစံက အမျိုးသားတွေကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာအနေအထားပြေပြစ်ရင် စိတ်ဓာတ်လည်းကောင်းတယ်လို့ သူတို့စိတ်ကထင်ကြပါတယ်တဲ့။
အပြုံးလှလှလေးတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံတွေကို ဖမ်းစားနိုင်တယ်လို့ သိပြီးသား မဟုတ်လား။ တကယ်တော့ အပြုံးလှတာထက် သွားလှတာကမှ အဓိပါတဲ့နော်။ သွားဖြူဖြူလေးတွေကို အမျိုးသားတွေက အရမ်းသဘောကျပါတယ်။
လက်မောင်း ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်မမတွေကို အမျိုးသားတွေ သိပ်ကိုကြွေကြပါတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်မောင်းရှည်ရှည်လေးတွေက သူတို့တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့ အမျိုးသားအများစုက ဝန်ခံထားကြပါတယ်။
မိန်းကလေးပီပီသသ အိညှက်အိညှက်ပြောတဲ့ အသံလေးတွေကို ကောင်လေးတွေ ကြွေကြတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် လူကေကာင်သေးပြီး အသံကျယ်ကျယ်မိန်းကလေးမျိုးက သူတို့ကို ပိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
ါကတော့ ပြောစရာမလိုတော့တဲ့ အရာပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကောက်ကြောင်းကို လိုက်မကြည့်တဲ့ ယောကျာ်းလေးဆိုတာ ရှိကို,မရှိတာပါ။ ပြီးတော့ ကောက်ကြောင်းလှတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို မကြိုက်တဲ့သူရောရှိပါ့မလား။ ကောက်ကြောင်းလှလှလေးတွေက သူတို့ကို လုံးဝဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
crush နဲ့သွားတွေ့ရင် အနီရောင်သာဝတ်သွားလို့ ပြောပါရစေ။ အနီရောင်ဝတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံကို သေချာပေါက်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့ လကျထပျခဲ့ရငျ အဆငျပွနေိုငျ မပွနေိုငျ တှကျကွညျ့နိုငျတဲ့နညျး
January 19, 2022 by Zaw Hein
ကိုယျနဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာကံပါမပါ၊ ပွီးတော့ ဘယျလိုခဈြခွငျးမြိုးနဲ့ လကျတှဲသှားကွမယျဆိုတာကို လှယျလှယျေ လးတှကျပွီး သိမွငျနိငျတဲ့ ဗဒေငျတှကျ နညျးလေးပါ။
ခဈြသူမှေးနသေ့က်ကရာဇျအားလုံးပေါငျးကွညျ့ ၊ နောကျဆုံး ရလာတဲ့ကိနျးတဈလုံးက အဖွပေေါ့။ ဥပမာတဈခုအနနေဲ့ ကွညျ့ကွရအောငျနျော
အဖွကေ 8 ပေါ့။ ရှငျးပွီနျော။ ကဲ..တှကျကွညျ့ကွရအောငျ
(၁) ရတဲ့သူကတော့ သငျဟာသူ့ကို အသကျပေးနိုငျလောကျအောငျ ခဈြပမေယျ့ သူ့အတှကျကတော့ ရညျးစားဟောငျးက ပဈသှားလို့ အသဲကှဲပွီး ခဏလာနားတဲ့ Bus ကားမှတျတိုငျလိုဖွဈနတောပါ။
သငျနဲ့အ တူနတေဲ့အခြိနျမှာ သူဟာပြျောရှငျနပေမေယျ့ အဲဒီပြျောရှငျခွငျးက ဟိုမရောကျဒီမရောကျနဲ့ဖွဈနတေတျ တယျ။
ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ပှရှေုပျတတျတဲ့သူ့အကငျြ့က သငျ့ထကျသာမယျ့သူကို အမွဲတမျးရှာဖှနေလေို့ ပဲဖွဈတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးအခဈြဖွဈဖို့အခှငျ့အလမျးဟာ မြောကျတဈကောငျ သဈပငျပျေါကွ ပုတျကတြာနဲ့ အတူတူလိုဖွဈနတောပါ။
နောငျBus ကားအသဈဟာသူ့ဆီဆိုကျကပျလာခဲ့ရငျ သူတဈခါ တညျးပွေးတကျသှားဖို့ဝနျလေးမှာမဟုတျသလို သငျ့ကိုဘယျလိုဖွဈပွီး ကနျြခဲ့မှာလဲဆိုပွီး ခေါငျးပွနျစောငျးငဲ့ဖို့ တောငျအခြိနျရှိမှာမဟုတျဘူး။
(၂) ရတဲ့သူကတော့ သငျနဲ့သူဟာ ခဈြတော့ခဈြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မုနျးတီးမှုနဲ့ပေါကျဖှားလာတဲ့ ခဈြခွငျးဖွဈတယျ။ တူတူနခေဲ့ရငျလညျး လကျဝှပှေဲ့ကိုကွညျ့နရေသလို နစေ့ဉျထသတျမှာအမှနျပါပဲ။
အကငျြ့တှကေလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွပါဘူး။ တဈယောကျပွငျးလာရငျ ကနျြတဲ့တဈယောကျကလညျး အလြှော့ပေးမှာ မဟုတျဘူး။ ဒါတောငျမှ သငျတို့မှာသုံးပှငျ့ဆိုငျမရှိသေးဘူးနျော။
တဈနကေ့ရြငျ သူကခဏဝေးဝေးလောကျ နကွေညျ့ကွရအောငျ လို့ပွောလာခဲ့ရငျသငျသူ့ကိုနားလညျပေးလိုကျပါ။ သူက သငျ့ကို မခဈြတာမဟုတျပါဘူး။
တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျနိုငျတဲ့အခြိနျတဈခုလောကျတော့ ထားပေးလိုကျကွပေါ့နော့
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! နောကျဆုံးတော့လညျး သငျက အစဈအမှနျကိုတှတေ့ာပဲလေ။ သငျတို့နှဈယောကျ ရဲ့တှဆေုံ့ခွငျးဟာ ရစေကျလို့ချေါလို့ရတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈတူညီနတောပဲ။ အကငျြ့၊ အကွိုကျ၊ညဈပတျခွငျး ၊ ပေါခွငျး၊ အရူးထခွငျးတှပေေါ့။ ဒါကွောငျ့ သူ့ကိုတှတေဲ့အခြိနျဆို ကိုယျ့ကိုယျကိုမှနျကွညျ့နရေသလိုပဲ။
သငျတို့အခဈြဟာ ဘာအရသာမှမရှိပမေယျ့ ခိုငျမွဲမှုရှိတာတော့အမှနျပဲလေ။ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့နှလုံးသားထွိ မငျရတယျဆိုတာပေါ့။
အဲ..တဈခုတော့ရှိတယျ။ သငျသတိထားရမှာက ကိုယျ့စိတျကိုယျပဲ၊ သငျ့အတှကျသူ ဟာငွီးငှစေ့ရာကောငျးနတေယျ။
ဒါကွောငျ့သငျဟာ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့အခဈြတှကေိုရှာဖှနေတေယျ။ နောကျဆုံးတော့လညျး ဘယျလူမှ သငျ့ရဲ့အခုလိုအရသာမရှိတဲ့ ပေါရှတျရှတျလူထကျ ပိုပွီးကောငျးမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာသငျသိလိမျ့မယျ။
မသိနိုငျဘူးလေ။ အဲဒီအခြိနျ ရောကျခဲ့ရငျ နှောငျးခငျြလညျးနှောငျး သှားမှာပေါ့။
(၄) ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခဈြဟာ စေးကပျကပျကွီးလိုဖွဈနတေယျ။ ဘယျလို ခှာခှာ ခှာလို့မရတဲ့ပုံစံ၊ ဘဝကိုဘယျလိုဖွတျသနျးရမှနျးမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနတေယျ။
သငျကလညျး အိန်ဒွရှေငျပီသစှာနဲ့ သူ့ကိုခဈြတယျ လို့ ဖှငျ့ပွောဖို့မရဲဘူးဖွဈနတေယျ။ဒါကွောငျ့ ဟိုဖကျကိုလညျးမသှား၊ ဒီဖကျကိုလညျး မရောကျဖွဈနတောေ ပါ့။
အကောငျးဆုံးကတော့ သငျတို့နှဈယောကျခေါငျးခငျြး ဆိုငျပွီး ပွဿနာကိုတူတူဖွရှေငျးကွတာအေ ကာငျးဆုံးပဲလေ။
မဟုတျရငျတော့ သငျတို့ထဲကတဈယောကျမဟုတျတဈယောကျဟာ အသဈတှပွေီ့း သငျတို့ရဲ့ဇာတျလမျးလေးက ဇာတျသိမျးသှားလိမျ့မယျနျော။
(၅) ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခဈြက သှေးရဲရဲသံရဲရဲအခဈြပေါ့။ဘာဂိုဏျးညာဂိုဏျးတှေ မာဖီးယားဂိုဏျးတှေ လိုကျရငျးအသကျလုပွီးဖွဈပျေါလာတဲ့အခဈြစဈ။
သငျတို့အခဈြလမျးကွောငျးမှာဘယျလောကျပဲအန်တရာယျရှိပမေယျ့ သငျတို့ကတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကိုနားလညျပွီး နှလုံးသားအစဈနဲ့အမှနျခဈြတာဖွဈတယျ။
သငျတို့နှဈယောကျက ခုခြိနျမှာခဈြသူအဆငျ့တှမေဟုတျတော့ပါဘူး။ နှဈလှာပေါငျးမှတဈရှကျဆိုပွီးဖွဈနကွေပါပွီ။ အသကျပေး ပွီးခဈြကွတဲ့ သူတှအေဆငျ့ ရောကျနကွေပါပွီ။
သငျဟာသူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြမဟုတျဘူးလို့ မယုံသင်ျကာမဖွစပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကွညျနပေါပွီ။ သငျဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှငျအစဈလို့
(၆) ရတဲ့သူက ခုခြိနျတှမှော ဘာစားစားသကွားထညျ့ဖို့တောငမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သငျတို့အ ခဈြရဲ့ခြိုမွိနျခွငျးက သကွားရဲ့အခြိုဓာတျကိုတောငျဝါးမွိုသှားလို့ဖွဈတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ဒီပြောရှငျမှုဟာ မပွညျ့စုံသေးဘူးလို့သငျခံစားရမယျ။ ရမွေောငျးပုပျမှာ လရိပျကိုမွငျရသလိုပေါ့။
သငျဟာ သငျ့ခဈြသူနဲ့ ဒီလိုအမှတျတရအခြိနျလေးတှကေိုဘယျလောကျကွာကွာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မသခြောသေးဘူး။ သို့ပမေယျ့လညျး သငျဟာ ခုခြိနျမှာအရမျးပြျောနတေယျလို့တော့ ပွောနိုငျတယျလေ။
အကယျလို့ သူ့ပွဿနာ တဈခုခုရှိပွီး သငျ့ကိုမသိစခေငျြရငျလညျး သငျက ဘာမှမသိသလိုနမှောအသအေခြာပဲ။
သငျဟာ သူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြဖွဈပွီလားလို့ မေးရရငျတော့ သငျ့ရဲ့အစှမျးအစပျေါမှာမူတညျပါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ခိုငျမာမှု နဲ့ လညျးဆိုငျတယျလေ။ သူ့ရဲ့ပွဿနာကိုဖွရှေငျးနိုငျရဲ့လားဆိုတာ
(၇) ရတဲ့သူက ဒီတဈယောကျကသငျ့ကိုအမွငျရှငျးသှားအောငျလုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ။
အနိမျ့စား လူ တဈယောကျကဘယျလို လဲဆိုတာပေါ့၊ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တဈကိုယျကောငျး ဆနျစိတျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုအထငျကွီးမှု၊ အမြားကွီး အမြားကွီးပေါ့။
သငျ့ကိုတဈခုခုကူညီလိုကျရငျ ကြေးဇူး အတငျခံခငျြတာကအရငျပေါ့။ ကြေးဇူးမမနေဲ့၊ ကြေးဇူးမမနေဲ့ဆိုတာ သူ့ပါးစပျကပွောလာတဲ့စကားတှပေေါ့။ ပှလေညျးပှတေယျ။
ကပျစေးလညျးနဲတယျ။ ဆိုးသောအရသာမြိုးစုံနဲ့ပွညျ့စုံနတေဲ့သူပေါ့။ သငျနဲ့ရညျးစား လာဖွဈတာကလညျး အထှအေထူးမဟုတျပါဘူး။ super casanova ဆိုတဲ့ ဂုဏျထူးကွီးကွောငျ့ပဲဖွဈတယျ။
သငျဟာ ရုပျမရှိရငျအဲဒီတဈယောကျက သငျ့ကိုမကျြစောငျးလေးတောငျ ထိုးကွညျ့မှာမဟုတျဘူး။
ပွီးတော့ သငျမသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတှဲပေါငျးမြားစှာကိုလညျး ဂိုဒေါငျကွီးထဲထညျ့ထားရတဲ့အထိ၊ ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့နောကျဆုံး အခဈြဖွဈခှငျ့ကတော့ လုံးဝမမြှျောလငျ့နပေါနဲ့တော့နျော။
ဒါကွောငျ့ အတူနတေဲ့အခြိနျဆို စိတျခမျြးသာရတယျ။ အဲဒီစိတျခမျြးသာတာကခြိုတာတှေ romatic တာတှေ မရှိတဲ့ ခံစားခကျြ၊ သဝနျတိုခွငျး၊လိုခငျြတပျမကျမှုမရှိတဲ့အခဈြဖွဈနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သငျတို့အခဈြက သကွားပွတျသှားတဲ့အခဈြနဲ့တူတယျလေ။ သငျတို့နှဈယောကျက တဈယောကျကိုတဈယောကျသိကွမှာပါ။
တဈယောကျအပျေါတဈယောကျဘယျလောကျနားလညျနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာ သူ့အပွငျသငျ့အပျေါမှာနောကျထပျနားလညျနိုငျမယျ့သူလညျး ရှာလို့တှတေ့ော့မှာမဟုတျတော့ဘူးလေ
(၉) ရတဲ့သူက အားရိုးရိုး…သငျတို့အခဈြကိုနှိုငျးရရငျတော့နံနကျနထှေကျခြိနျနဲ့ ညနနေဝေငျခြိနျ၊ ကောငျး ကငျနဲ့မွကွေီး၊ သူခမျြးသာနဲ့သူဆငျးရဲ့၊ နတျပနျးနဲ့ ငရဲပနျး စတာတှပေေါ့။
ဒါကွောငျ့ သငျတို့အခဈြကို သငျတို့ကိုယျတိုငျတောငျနားမလညျနိုငျပဲဖွဈနရေတယျ။
နောကျထပျ ဘာထူးဆနျးစရာတှေ ထပျလာဦးမလဲဆိုပွီးတော့ သငျတို့နှဈယောကျရဲ့အခဈြအကွောငျးဟာ ဟာသတဈပုဒျလိုပဲဖွဈနတေယျ။
သငျတို့နှဈဦးကလညျးသိနတေယျလေ။ ကွာရှညျလကျတှဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့။ ခဏတဈဖွုတျလေးလကျတှဲ တာကလညျး ကိုယျ့ဘဝမှာရယျစရာအမှတျတရအဖွဈထားခဲ့ခငျြလို့ပဲဖွဈတယျ။
သငျတို့နှဈဦးဟာအလှနျခွားနားလှနျးလို့ တူတူသှားလို့မရဘူးဆိုပွီးတော့ပေါ့။ သငျတို့နှဈဦးလမျးခှဲသှားခဲ့ရငျလညျး သူငယျခငျြးကောငျးတှဆေကျဖွဈဦးမှာပါ။
ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ ဖူးစာကံပါမပါ၊ ပြီးတော့ ဘယ်လိုချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ လက်တွဲသွားကြမယ်ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ေ လးတွက်ပြီး သိမြင်နိင်တဲ့ ဗေဒင်တွက် နည်းလေးပါ။
ချစ်သူမွေးနေ့သက္ကရာဇ်အားလုံးပေါင်းကြည့် ၊ နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက အဖြေပေါ့။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်ကြရအောင်နော်
အဖြေက 8 ပေါ့။ ရှင်းပြီနော်။ ကဲ..တွက်ကြည့်ကြရအောင်
(၁) ရတဲ့သူကတော့ သင်ဟာသူ့ကို အသက်ပေးနိုင်လောက်အောင် ချစ်ပေမယ့် သူ့အတွက်ကတော့ ရည်းစားဟောင်းက ပစ်သွားလို့ အသဲကွဲပြီး ခဏလာနားတဲ့ Bus ကားမှတ်တိုင်လိုဖြစ်နေတာပါ။
သင်နဲ့အ တူနေတဲ့အချိန်မှာ သူဟာပျော်ရွှင်နေပေမယ့် အဲဒီပျော်ရွှင်ခြင်းက ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဖြစ်နေတတ် တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပွေရှုပ်တတ်တဲ့သူ့အကျင့်က သင့်ထက်သာမယ့်သူကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနေလို့ ပဲဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဟာ မျောက်တစ်ကောင် သစ်ပင်ပေါ်ကြ ပုတ်ကျတာနဲ့ အတူတူလိုဖြစ်နေတာပါ။
နောင်Bus ကားအသစ်ဟာသူ့ဆီဆိုက်ကပ်လာခဲ့ရင် သူတစ်ခါ တည်းပြေးတက်သွားဖို့ဝန်လေးမှာမဟုတ်သလို သင့်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့မှာလဲဆိုပြီး ခေါင်းပြန်စောင်းငဲ့ဖို့ တောင်အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
(၂) ရတဲ့သူကတော့ သင်နဲ့သူဟာ ချစ်တော့ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မုန်းတီးမှုနဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ တူတူနေခဲ့ရင်လည်း လက်ဝှေ့ပွဲကိုကြည့်နေရသလို နေ့စဉ်ထသတ်မှာအမှန်ပါပဲ။
အကျင့်တွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ တစ်ယောက်ပြင်းလာရင် ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကလည်း အလျှော့ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင်မှ သင်တို့မှာသုံးပွင့်ဆိုင်မရှိသေးဘူးနော်။
တစ်နေ့ကျရင် သူကခဏဝေးဝေးလောက် နေကြည့်ကြရအောင် လို့ပြောလာခဲ့ရင်သင်သူ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ။ သူက သင့်ကို မချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်နိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ ထားပေးလိုက်ကြပေါ့နော့
(၃) ရတဲ့သူက Yahoo! နောက်ဆုံးတော့လည်း သင်က အစစ်အမှန်ကိုတွေ့တာပဲလေ။ သင်တို့နှစ်ယောက် ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ရေစက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီနေတာပဲ။ အကျင့်၊ အကြိုက်၊ညစ်ပတ်ခြင်း ၊ ပေါခြင်း၊ အရူးထခြင်းတွေပေါ့။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်ကြည့်နေရသလိုပဲ။
သင်တို့အချစ်ဟာ ဘာအရသာမှမရှိပေမယ့် ခိုင်မြဲမှုရှိတာတော့အမှန်ပဲလေ။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသားထြိ မင်ရတယ်ဆိုတာပေါ့။
အဲ..တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ သင်သတိထားရမှာက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပဲ၊ သင့်အတွက်သူ ဟာငြီးငွေ့စရာကောင်းနေတယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အချစ်တွေကိုရှာဖွေနေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘယ်လူမှ သင့်ရဲ့အခုလိုအရသာမရှိတဲ့ ပေါရွှတ်ရွှတ်လူထက် ပိုပြီးကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိလိမ့်မယ်။
မသိနိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီအချိန် ရောက်ခဲ့ရင် နှောင်းချင်လည်းနှောင်း သွားမှာပေါ့။
(၄) ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဟာ စေးကပ်ကပ်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လို ခွာခွာ ခွာလို့မရတဲ့ပုံစံ၊ ဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမှန်းမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနေတယ်။
သင်ကလည်း အိနြေ္ဒရှင်ပီသစွာနဲ့ သူ့ကိုချစ်တယ် လို့ ဖွင့်ပြောဖို့မရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့် ဟိုဖက်ကိုလည်းမသွား၊ ဒီဖက်ကိုလည်း မရောက်ဖြစ်နေတာေ ပါ့။
အကောင်းဆုံးကတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ခေါင်းချင်း ဆိုင်ပြီး ပြဿနာကိုတူတူဖြေရှင်းကြတာအေ ကာင်းဆုံးပဲလေ။
(၅) ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်က သွေးရဲရဲသံရဲရဲအချစ်ပေါ့။ဘာဂိုဏ်းညာဂိုဏ်းတွေ မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေ လိုက်ရင်းအသက်လုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချစ်စစ်။
သင်တို့အချစ်လမ်းကြောင်းမှာဘယ်လောက်ပဲအန္တရာယ်ရှိပေမယ့် သင်တို့ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုနားလည်ပြီး နှလုံးသားအစစ်နဲ့အမှန်ချစ်တာဖြစ်တယ်။
သင်တို့နှစ်ယောက်က ခုချိန်မှာချစ်သူအဆင့်တွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ နှစ်လွှာပေါင်းမှတစ်ရွက်ဆိုပြီးဖြစ်နေကြပါပြီ။ အသက်ပေး ပြီးချစ်ကြတဲ့ သူတွေအဆင့် ရောက်နေကြပါပြီ။
သင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်မဟုတ်ဘူးလို့ မယုံသင်္ကာမဖြစပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကြည်နေပါပြီ။ သင်ဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့ ဖူးစာရှင်အစစ်လို့
(၆) ရတဲ့သူက ခုချိန်တွေမှာ ဘာစားစားသကြားထည့်ဖို့တောငမလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တို့အ ချစ်ရဲ့ချိုမြိန်ခြင်းက သကြားရဲ့အချိုဓာတ်ကိုတောင်ဝါးမြိုသွားလို့ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီပျောရွှင်မှုဟာ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့သင်ခံစားရမယ်။ ရေမြောင်းပုပ်မှာ လရိပ်ကိုမြင်ရသလိုပေါ့။
သင်ဟာ သင့်ချစ်သူနဲ့ ဒီလိုအမှတ်တရအချိန်လေးတွေကိုဘယ်လောက်ကြာကြာခံစားရဦးမလဲဆိုတာ မသေချာသေးဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း သင်ဟာ ခုချိန်မှာအရမ်းပျော်နေတယ်လို့တော့ ပြောနိုင်တယ်လေ။
အကယ်လို့ သူ့ပြဿနာ တစ်ခုခုရှိပြီး သင့်ကိုမသိစေချင်ရင်လည်း သင်က ဘာမှမသိသလိုနေမှာအသေအချာပဲ။
သင်ဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ပြီလားလို့ မေးရရင်တော့ သင့်ရဲ့အစွမ်းအစပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ခိုင်မာမှု နဲ့ လည်းဆိုင်တယ်လေ။ သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့လားဆိုတာ
(၇) ရတဲ့သူက ဒီတစ်ယောက်ကသင့်ကိုအမြင်ရှင်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
အနိမ့်စား လူ တစ်ယောက်ကဘယ်လို လဲဆိုတာပေါ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးမှု၊ အများကြီး အများကြီးပေါ့။
သင့်ကိုတစ်ခုခုကူညီလိုက်ရင် ကျေးဇူး အတင်ခံချင်တာကအရင်ပေါ့။ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့၊ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့ဆိုတာ သူ့ပါးစပ်ကပြောလာတဲ့စကားတွေပေါ့။ ပွေလည်းပွေတယ်။
ကပ်စေးလည်းနဲတယ်။ ဆိုးသောအရသာမျိုးစုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူပေါ့။ သင်နဲ့ရည်းစား လာဖြစ်တာကလည်း အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး။ super casanova ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။
သင်ဟာ ရုပ်မရှိရင်အဲဒီတစ်ယောက်က သင့်ကိုမျက်စောင်းလေးတောင် ထိုးကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။
ပြီးတော့ သင်မသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတွဲပေါင်းများစွာကိုလည်း ဂိုဒေါင်ကြီးထဲထည့်ထားရတဲ့အထိ၊ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး အချစ်ဖြစ်ခွင့်ကတော့ လုံးဝမမျှော်လင့်နေပါနဲ့တော့နော်။
(၈) ရတဲ့သူက သူ့ရဲကနောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးဟာ ၅ဝ% = ၅ဝ% ပါပဲ။ သင်တို့အချစ်ဟာ ကြာပြီး အားလုံးနေရာကျနေပြီလေ။ တစ်ယောက်အကြောင်းကိုတစ်ယောက်သိနေပြီလေ။
ဒါကြောင့် အတူနေတဲ့အချိန်ဆို စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ အဲဒီစိတ်ချမ်းသာတာကချိုတာတွေ romatic တာတွေ မရှိတဲ့ ခံစားချက်၊ သဝန်တိုခြင်း၊လိုချင်တပ်မက်မှုမရှိတဲ့အချစ်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်တို့အချစ်က သကြားပြတ်သွားတဲ့အချစ်နဲ့တူတယ်လေ။ သင်တို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိကြမှာပါ။
တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ဘယ်လောက်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ သူ့အပြင်သင့်အပေါ်မှာနောက်ထပ်နားလည်နိုင်မယ့်သူလည်း ရှာလို့တွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ
(၉) ရတဲ့သူက အားရိုးရိုး…သင်တို့အချစ်ကိုနှိုင်းရရင်တော့နံနက်နေထွက်ချိန်နဲ့ ညနေနေဝင်ချိန်၊ ကောင်း ကင်နဲ့မြေကြီး၊ သူချမ်းသာနဲ့သူဆင်းရဲ့၊ နတ်ပန်းနဲ့ ငရဲပန်း စတာတွေပေါ့။
ဒါကြောင့် သင်တို့အချစ်ကို သင်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်နားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေရတယ်။
နောက်ထပ် ဘာထူးဆန်းစရာတွေ ထပ်လာဦးမလဲဆိုပြီးတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်အကြောင်းဟာ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုပဲဖြစ်နေတယ်။
သင်တို့နှစ်ဦးကလည်းသိနေတယ်လေ။ ကြာရှည်လက်တွဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့။ ခဏတစ်ဖြုတ်လေးလက်တွဲ တာကလည်း ကိုယ့်ဘဝမှာရယ်စရာအမှတ်တရအဖြစ်ထားခဲ့ချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။
သင်တို့နှစ်ဦးဟာအလွန်ခြားနားလွန်းလို့ တူတူသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့။ သင်တို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲသွားခဲ့ရင်လည်း သူငယ်ချင်းကောင်းတွေဆက်ဖြစ်ဦးမှာပါ။
ဘဝအတှကျ ရညျရှယျထားသူနဲ့တှရေ့ငျ ဒါတှမေေးကွညျ့ပါ
ခဈြတို့ရေ ဘဝအတှကျ လို့တှေးမိတဲ့သူပျေါလာရငျတော့ ဒီမေးခှနျး၅ ခုမေးကွညျ့ပါဦးနျော။
သမီးရညျးစားထားတဲ့အခါ ဘဝအတှကျရညျရှယျခကျြ ပွီးတော့ပဲ ရညျးစားဖွဈတာခညျြးပါပဲ ။ဒါပမေယျ့ လညျးတဈခါတလရေညျးစားအဆငျ့နဲ့ဘဝဟာအဆုံးသတျလိုကျ ပွီး ဘဝလကျတှဲမယျ့ဆိုတဲ့အဆငျ့ကိူမရောကျတာတှရှေိတယျ့နျော အဲဒီလိုမဟုတျပဲ ကိုယျ့ရငျထဲစိတျထဲမှာ တကယျ့ကိူလကျတှဲခငျြစိတျ လကျထပျခငျြစိတျ ဖွဈမိတဲ့သူလညျးရှိမှာပါ။
အဲဒီလို စိတျခံစားခကျြတှရှေိနတေဲ့သူနဲ့တှရေ့ငျတော့ မေးကွညျ့ရမှာတှရှေိပါတယျ့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကို မေးရမှာတှရှေိ့သလို သူကိုလညျးမေးပါ။သူနဲ့ဆိုရငျ စိတျခမျြးသာမှာသခြောလားကိုယျ့ခဈြသူနဲ့အတူနရေငျတော့စိတျခမျြသာမှာပေါ့လို့ ပွောမှာသခြောပါတယျ။
ကိုယျ့ခဈြသူအနနေဲ့ မဟုတျဘဲ လကျတှဲဖျော အဖွဈစဉျးစားရမှာပါ။ သူနဲ့တသကျလုံး စိတျခမျြးသာမှာလား တှေးပါ။ သူရဲ့အမူအကငျြ့တှကေ ကိုယျ့ကို တကယျပြျောရှငျစနေိုငျလားဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုမေးပါ။ ကိုယျကရော တသကျလုံးပြျောမလားတှေးပါ။
ခှငျ့လှတျနိုငျလားအိမျထောငျပွုတယျဆိုတာခဈြသူဘဝနဲ့ အမြားကွီးခွားနားတယျဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျ့သူရဲ့အပွုအမူအကငျြ့တှကေို အကုနျလုံး သခြောသိပွီလား ဒါတှကေိုရောခှငျလှတျနိုငျလားဆိုတာပါတှေးပါ။သေးသေးမှားမှားလေးကအစပေါ့။ ခဈြသူဘဝမို့ အဆငျပွအေောငျ
နားလညျပေးတာမြိုးမဟုတျဘဲနဲ့ပေါ့။ ဘဝ လကျတှဲဖျောဆိုရငျတော့ ဒီလိုမြိုးတှကေို နားလညျခှငျ့လှတျပေးနိုငျမှရမှာပါမိဘတွေလကျတှဲတယျဆိုတာ သူနဲ့ကိုယျ့ လကျထပျတာဆိုပမေယျ့ နှဈဖကျမိဘတှကေလညျး အထိုကျအလြောကျ ပေါငျးစညျးရမှာပါ။ သူမိဘတှကေရော
ကိုယျ့နဲ့အဆငျပွမေယျ့လူမြိုးလားဆိုတာပါ ထညျ့တှေးပါ။ ညီအဈကိုမောငျနှမတှကေရော ဘယျလိုရှိလဲဆိုတာ ထညျ့စဉျးစားပွီး အဆငျပွနေိုငျလားဆိုတာ သူ့ကိုပါ မေးထားလို့ရပါတယျ။ နောကျမှ မောငျနှမတှကွေောငျ့ အဆငျမပွမေဖွဈရအောငျပါ။လကျထပျပွီးရငျခဈြသူနဲ့နရေငျ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဆိုတာ ခဈြနတေုနျးစိတျကူးယဉျစကားတှပေါ။ လကျထပျပွီးရငျ ဘဝက အခွကေဖြို့လိုပါတယျ။ အဲဒီအခါ နှဈဖကျမိဘတှေ ကိုယျနဲ့နမှောလား မောငျနှမတှကေို ထောကျပံပေးဖို့လိုလား လကျထပျပွီးနောကျ အစီအစဉျကို ကိုယျတိုငျလညျးဆှဲဖို့လိုသလို သူ့ကိုလညျးတှေးထားခိုငျးပါ။
ထပျတူညီမြှသာ ဘဝ လကျတှဲဖျောအဖွဈရှေးခယျြဖို့စဉျးစားပါသူ့ရဲ့စိတျသဘောထားကိုယျ့ကတော့ ဘဝ တှကျရညျရှယျထားပမေယျ့ သူ့ဘကျကတော့ ဟုတျခငျြမှဟုတျမှာပါ။ ဒါကိုမေးကွညျ့ဖို့ တီးခေါကျကွညျ့ဖို့လိုတယျနျော။ ကိုယျ့ခဈြသူလိမျနလေား ညာနလေားဆိုတာလညျးကိုယျတိုငျကပဲ အဖွရှောနိုငျမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ သူဘကျကအခွနေကေိုလညျး သိနပေါစေ။
ချစ်တို့ရေ ဘဝအတွက် လို့တွေးမိတဲ့သူပေါ်လာရင်တော့ ဒီမေးခွန်း၅ ခုမေးကြည့်ပါဦးနော်။
သမီးရည်းစားထားတဲ့အခါ ဘဝအတွက်ရည်ရွယ်ချက် ပြီးတော့ပဲ ရည်းစားဖြစ်တာချည်းပါပဲ ။ဒါပေမယ့် လည်းတစ်ခါတလေရည်းစားအဆင့်နဲ့ဘဝဟာအဆုံးသတ်လိုက် ပြီး ဘဝလက်တွဲမယ့်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိူမရောက်တာတွေရှိတယ့်နော် အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရင်ထဲစိတ်ထဲမှာ တကယ့်ကိူလက်တွဲချင်စိတ် လက်ထပ်ချင်စိတ် ဖြစ်မိတဲ့သူလည်းရှိမှာပါ။
အဲဒီလို စိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့ မေးကြည့်ရမှာတွေရှိပါတယ့် ကိုယ့်ကိုယ့်ကို မေးရမှာတွေ့ရှိသလို သူကိုလည်းမေးပါ။သူနဲ့ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမှာသေချာလားကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူနေရင်တော့စိတ်ချမ်သာမှာပေါ့လို့ ပြောမှာသေချာပါတယ်။
ကိုယ့်ချစ်သူအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ လက်တွဲဖော် အဖြစ်စဉ်းစားရမှာပါ။ သူနဲ့တသက်လုံး စိတ်ချမ်းသာမှာလား တွေးပါ။ သူရဲ့အမူအကျင့်တွေက ကိုယ့်ကို တကယ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်လားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ ကိုယ်ကရော တသက်လုံးပျော်မလားတွေးပါ။
ခွင့်လွှတ်နိုင်လားအိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာချစ်သူဘဝနဲ့ အများကြီးခြားနားတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်သူရဲ့အပြုအမူအကျင့်တွေကို အကုန်လုံး သေချာသိပြီလား ဒါတွေကိုရောခွင်လွတ်နိုင်လားဆိုတာပါတွေးပါ။သေးသေးမွှားမွှားလေးကအစပေါ့။ ချစ်သူဘဝမို့ အဆင်ပြေအောင်
နားလည်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့။ ဘဝ လက်တွဲဖော်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုးတွေကို နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်မှရမှာပါမိဘေတြလက်တွဲတယ်ဆိုတာ သူနဲ့ကိုယ့် လက်ထပ်တာဆိုပေမယ့် နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်း အထိုက်အလျောက် ပေါင်းစည်းရမှာပါ။ သူမိဘတွေကရော
ကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေမယ့်လူမျိုးလားဆိုတာပါ ထည့်တွေးပါ။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကရော ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ ထည့်စဉ်းစားပြီး အဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတာ သူ့ကိုပါ မေးထားလို့ရပါတယ်။ နောက်မှ မောင်နှမတွေကြောင့် အဆင်မပြေမဖြစ်ရအောင်ပါ။လက်ထပ်ပြီးရင်ချစ်သူနဲ့နေရင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုတာ ချစ်နေတုန်းစိတ်ကူးယဉ်စကားတွေပါ။ လက်ထပ်ပြီးရင် ဘဝက အခြေကျဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအခါ နှစ်ဖက်မိဘတွေ ကိုယ်နဲ့နေမှာလား မောင်နှမတွေကို ထောက်ပံပေးဖို့လိုလား လက်ထပ်ပြီးနောက် အစီအစဉ်ကို ကိုယ်တိုင်လည်းဆွဲဖို့လိုသလို သူ့ကိုလည်းတွေးထားခိုင်းပါ။
ထပ်တူညီမျှသာ ဘဝ လက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားပါသူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားကိုယ့်ကတော့ ဘဝ တွက်ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် သူ့ဘက်ကတော့ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။ ဒါကိုမေးကြည့်ဖို့ တီးခေါက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်။ ကိုယ့်ချစ်သူလိမ်နေလား ညာနေလားဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်ကပဲ အဖြေရှာနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် သူဘက်ကအခြေနေကိုလည်း သိနေပါစေ။
မိနျးခလေး တျောတျောမြားမြားက အိမျထောငျကြ ကံကောငျး ၊ မကောငျး ဆိုတာ မသိနိုငျပါဘူး ။ ကိုယျတှဖေူ့းခဲ့တဲ့ မိနျးခလေးတှေ ရှိတယျ ။
(1) အိမျထောငျ မကခြငျကတော့ ယောကျြားတှနေဲ့ တယောကျပွီးတယောကျတှဲ ၊ တယောကျတောငျ မပွတျသေးဘူး နောကျတယောကျက အဆငျသငျ့ပဲ ။
အဲဒီလို မိနျးခလေး တျောတျော မြားမြားက အိမျထောငျကတြော့ ကံကောငျး လိုကျကွတာ ။သူတို့ ယောကျြားတှကေ ရှတှေေ ငှတှေေ ကားတှေ ဘာတှေ အပွညျ့စုံ ထားပေး ကွတယျ ။
ဒါမှမဟုတျ စိတျခမျြးသာအောငျ ထားပေး ကွတယျ ။အမွဲတမျး တောကျတောကျပွောငျပွောငျနဲ့ နရေတယျ ။
(2) တခြို့ မိနျးခလေးတှကေတြော့ အိမျထောငျ မကခြငျ ခဈြသူ တယောကျထဲ အပျေါ သစ်စာရှိ ခဲ့တယျ ။သူ့အပျေါ အနဈနာ ခံခဲ့တယျ ။ သူတို့ ခဈြသူ ဘယျလောကျ ဆိုးဆိုး မပွတျနိုငျ ခဲ့ဘူး ။
သူ့တို့ ခဈြသူ တယောကျထဲကိုသာ ခဈြခဲ့ ကွတယျ ။
ဘေးမှာ တခွား ယောကျြားတှေ ခဈြခှငျ့ ပနျရငျတောငျ ငွငျးပယျခဲ့ ကွတယျ ။တကမ်ဘာလုံးမှာ ယောကျြား တယောကျပဲ ရှိတယျလို့မွငျခဲ့ ကွတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့လောကျ ကောငျးတဲ့ မိနျးခလေး အိမျထောငျကတြဲ့အခါ တျောတျော မြားမြားက ကံဆိုးကွတယျ ။ အိမျထောငျကကြံ မကောငျးဘူး ။
ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ပထမ မိနျးခလေးက ယောကျြားတှေ အမြားကွီး တှဲခဲ့တယျ ။လလေ့ာတယျ ။ သူ့အပျေါ ဘယျသူ အနဈနာခံလဲ ။
သူ့ အပျေါ မကောငျးတဲ့ သူဆို စှနျ့ပဈတယျ ။အဲဒီအထဲကမှ သူ့အပျေါအကောငျးဆုံး ယောကျြားကိုသာ သူမ ရှေးခယျြခဲ့တယျ ။
ဒုတိယ မိနျးခလေးကတော့ ယောကျြားတယောကျကိုသာ တှဲပီး အဲ့ဒီယောကျြားကိုပဲ ကောငျးကောငျး မကောငျးကာငျး သူနဲ့သာ အိမျထောငျ ပွုကွတယျ ။
တခွား လူတှကေို သူတို့ မလလေ့ာခဲကွဘူး ။ မရှေးခယျြပဲယူ လိုကျတယျ ။ ယောကျြားက မကောငျးတော့ ဒုက်ခ ရောကျကွတယျ ။
အိမျထောငျကကြံ ကောငျးတဲ့ မိနျးခလေးက ဘာနဲ့တူသလဲ ဆိုတာ အရမျး တနျဖိုးကွီးတဲ့ သရဖူ တခု ရတာနဲ့ တူတယျ ။
လူတကာ ငေးမော ကွတယျ ။ လူတကာ အားကတြယျ ။
အိမျထောငျကြ ကံဆိုးတဲ့ မိနျးမ ကတြော့ အရမျးလေးတဲ့ သံခမောကျ ရတာနဲ့ တူတယျ ။နကေလညျးပူ ခြှတျလို့လညျး မရ ။ အရိပျတော့ ရတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လေးတယျ ။
တခြို့ ယောကျြားတှကေ သံခမောကျနဲ့ တူကွတယျ ။ မိနျးမသား တှကေ အဲ့ယောကျြားနဲ့ ကှာမယျ ဆိုတော့လညျး သားသမီး မကျြနှာ ထောကျရ ။
အဖေ မရှိ မကျြနှာ ငယျမှာလညျးဆိုး ။ ယောကျြား မရှိတော့ သူမြား အထငျသေး ခံရမှာလညျးကွောကျ ။အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဆိုးသှမျးပမေဲ့ မကှာနိုငျ ။ သံခမောကျနဲ့ တူတယျ ။ မဆောငျးရငျ လညျး နပေူ ။
ဆောငျးရငျ ကတြော့လညျး အရမျးလေး ။ ဒါနဲ့ပဲ သံသယာလညျ ။ဒါကွောငျ့ အိမျထောငျမကသြေးတဲ့ ညီမငယျမြား အနနေဲ့ အိမျထောငျပွုတော့မယျဆို
သံခမောကျ နဲ့ သရဖူ ဘယျဟာကို ရှေးခယျြမလဲ ဆိုတာ ကိုယျတိုငျ သသေခြောခြာ ဆုံးဖွတျကွပါ ။
ခဈြသူ ရညျးစား ဘဝကတညျးက ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးတဲ့ ယောကျြားက အိမျထောငျကသြှားရငျ ကောငျးမယျလို့ မထငျကွပါနဲ့ ။ ပိုဆိုး သှားမယျ ။
သူတို့သာ ကိုယျ့ကို တကယျ ခဈြရငျ ကိုယျ့အပျေါ အနဈနာ ခံမယျ ။ ရိုးသားမယျ ။ ကွိုးစားမယျ ။
ညမလေး တို့ရေ. . မိုကျရူးရဲ မဆနျပါနဲ့ ။ အိမျထောငျကတြယျ ဆိုတာ တဘဝစာ အတှကျပါ ။မရှေးခယျြပဲ မဆုံးဖွတျကွပါနဲ့ ။ ရှေးခယျြကွပါ ။ သသေခြောခြာလေး ရှေးခယျြကွပါ ။Crd
မိန်းခလေး တော်တော်များများက အိမ်ထောင်ကျ ကံကောင်း ၊ မကောင်း ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး ။ ကိုယ်တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ရှိတယ် ။
(1) အိမ်ထောင် မကျခင်ကတော့ ယောက်ျားတွေနဲ့ တယောက်ပြီးတယောက်တွဲ ၊ တယောက်တောင် မပြတ်သေးဘူး နောက်တယောက်က အဆင်သင့်ပဲ ။
အဲဒီလို မိန်းခလေး တော်တော် များများက အိမ်ထောင်ကျတော့ ကံကောင်း လိုက်ကြတာ ။သူတို့ ယောက်ျားတွေက ရွှေတွေ ငွေတွေ ကားတွေ ဘာတွေ အပြည့်စုံ ထားပေး ကြတယ် ။
ဒါမှမဟုတ် စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေး ကြတယ် ။အမြဲတမ်း တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ နေရတယ် ။
(2) တချို့ မိန်းခလေးတွေကျတော့ အိမ်ထောင် မကျခင် ချစ်သူ တယောက်ထဲ အပေါ် သစ္စာရှိ ခဲ့တယ် ။သူ့အပေါ် အနစ်နာ ခံခဲ့တယ် ။ သူတို့ ချစ်သူ ဘယ်လောက် ဆိုးဆိုး မပြတ်နိုင် ခဲ့ဘူး ။
သူ့တို့ ချစ်သူ တယောက်ထဲကိုသာ ချစ်ခဲ့ ကြတယ် ။
ဘေးမှာ တခြား ယောက်ျားတွေ ချစ်ခွင့် ပန်ရင်တောင် ငြင်းပယ်ခဲ့ ကြတယ် ။တကမ္ဘာလုံးမှာ ယောက်ျား တယောက်ပဲ ရှိတယ်လို့မြင်ခဲ့ ကြတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲ့လောက် ကောင်းတဲ့ မိန်းခလေး အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ တော်တော် များများက ကံဆိုးကြတယ် ။ အိမ်ထောင်ကျကံ မကောင်းဘူး ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပထမ မိန်းခလေးက ယောက်ျားတွေ အများကြီး တွဲခဲ့တယ် ။လေ့လာတယ် ။ သူ့အပေါ် ဘယ်သူ အနစ်နာခံလဲ ။
သူ့ အပေါ် မကောင်းတဲ့ သူဆို စွန့်ပစ်တယ် ။အဲဒီအထဲကမှ သူ့အပေါ်အကောင်းဆုံး ယောက်ျားကိုသာ သူမ ရွှေးချယ်ခဲ့တယ် ။
ဒုတိယ မိန်းခလေးကတော့ ယောက်ျားတယောက်ကိုသာ တွဲပီး အဲ့ဒီယောက်ျားကိုပဲ ကောင်းကောင်း မကောင်းကာင်း သူနဲ့သာ အိမ်ထောင် ပြုကြတယ် ။
တခြား လူတွေကို သူတို့ မလေ့လာခဲကြဘူး ။ မရွေးချယ်ပဲယူ လိုက်တယ် ။ ယောက်ျားက မကောင်းတော့ ဒုက္ခ ရောက်ကြတယ် ။
အိမ်ထောင်ကျကံ ကောင်းတဲ့ မိန်းခလေးက ဘာနဲ့တူသလဲ ဆိုတာ အရမ်း တန်ဖိုးကြီးတဲ့ သရဖူ တခု ရတာနဲ့ တူတယ် ။
လူတကာ ငေးမော ကြတယ် ။ လူတကာ အားကျတယ် ။
အိမ်ထောင်ကျ ကံဆိုးတဲ့ မိန်းမ ကျတော့ အရမ်းလေးတဲ့ သံခမောက် ရတာနဲ့ တူတယ် ။နေကလည်းပူ ချွတ်လို့လည်း မရ ။ အရိပ်တော့ ရတယ် ။ ဒါပေမယ့် လေးတယ် ။
တချို့ ယောက်ျားတွေက သံခမောက်နဲ့ တူကြတယ် ။ မိန်းမသား တွေက အဲ့ယောက်ျားနဲ့ ကွာမယ် ဆိုတော့လည်း သားသမီး မျက်နှာ ထောက်ရ ။
အဖေ မရှိ မျက်နှာ ငယ်မှာလည်းဆိုး ။ ယောက်ျား မရှိတော့ သူများ အထင်သေး ခံရမှာလည်းကြောက် ။အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဆိုးသွမ်းပေမဲ့ မကွာနိုင် ။ သံခမောက်နဲ့ တူတယ် ။ မဆောင်းရင် လည်း နေပူ ။
ဆောင်းရင် ကျတော့လည်း အရမ်းလေး ။ ဒါနဲ့ပဲ သံသယာလည် ။ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့ ညီမငယ်များ အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆို
သံခမောက် နဲ့ သရဖူ ဘယ်ဟာကို ရွေးချယ်မလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ကြပါ ။
ချစ်သူ ရည်းစား ဘဝကတည်းက ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့ ယောက်ျားက အိမ်ထောင်ကျသွားရင် ကောင်းမယ်လို့ မထင်ကြပါနဲ့ ။ ပိုဆိုး သွားမယ် ။
သူတို့သာ ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်ရင် ကိုယ့်အပေါ် အနစ်နာ ခံမယ် ။ ရိုးသားမယ် ။ ကြိုးစားမယ် ။
ညမလေး တို့ရေ. . မိုက်ရူးရဲ မဆန်ပါနဲ့ ။ အိမ်ထောင်ကျတယ် ဆိုတာ တဘဝစာ အတွက်ပါ ။မရွေးချယ်ပဲ မဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့ ။ ရွေးချယ်ကြပါ ။ သေသေချာချာလေး ရွေးချယ်ကြပါ ။Crd
အအိုဖွဈသှားတဲ့သူတှဖေတျရငျ ရငျထုမနာဖွဈမှာစိုးလို့အပြိုစဈစဈ မိနျးခလေးမြားသာဖတျရနျ
January 17, 2022 by Zaw Hein
ရညျးစားဖွဈတာ ၁ ရကျမကွာဘူး living together က နနေကွေပွီလတေကယျတော့ လကျမထပျရသေးပဲနဲ့အတူတူနကွေတာ မိနျးခလေးတဈယောကျအတှကျ လုံးဝတနျဖိုးကသြှားပါပွီအပြိုစငျ ဘဝဆိုတာ ယောင်ျကြားတိုငျးရဲ့ တနျဖိုးထားခွငျးကို ခံထားရသူလို့တောငျ တငျစားထားကွပါတယျ။အပြိုစငျကနေ အအို ဖွဈဖို့က ၅မိနဈမကွာပါဘူး
ဒါပမေယျ့ အအိုကနေ အပြို ပွနျဖွဈဖို့က ရှိသမြှ စညျးစိမျး ပုံပေးမယျဆိုရငျတော့ ဒီ ဘဝအတှကျပွနျမရနိုငျတော့ပါဘူးခဈြသူရှိခဲ့ရငျလညျး ဒီအပြိုစငျဘဝကိုထိနျးသိမျးပါ။ ခဈြသူကို နားလညျအောငျ သူသဘောပေါကျအောငျ ပွောပွထားပါ။ ဒါမှ သူဘကျက လကျမခံဘူး ။
စိတျခုသှားတယျဆိုရငျတော့ရဲရဲကွီးသာ လမျးခှဲလိုကျပါ။သူ တကယျခဈြတာမဟုတျတာသခြောနပေါပွီ။သလေောကျအောငျခဈြနပေါစေ အပြိုစငျ ဘဝကိုထိနျးသိမျးထားပါ။ဘဝမှာ ရညျးစားဦးနဲ့လှဲကတြာ ၁၀၀မှာ ၉၀ အထိ ရှိထားတာပါ။ ရညျးစားဦးကတညျးက အပြိုစငျဘဝကို ပေးထားခဲ့လို့။
အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ သူနဲ့မြားလှဲသှားခဲ့ရငျနောငျတှငျ ကိုယျနဲ့တကယျလကျတှဲရမယျ့ ယောင်ျကြားနဲ့တှမှေ့ာ အကွီးကွီးနောငျတရပါလိမျ့မယျ ။ အဲကမြှတော့နောငျတရပါတယျလို့သိသှားလညျးနောကျကသြှားပါပွီ။အခနျ့မသငျ့ရငျ အိမျထောငျရပွေသာနာတှတေောသျဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ထိုငျဝမျမှာ အိမျထာငျကပြွီးလို့ကလေးတောငျ ၃ယောကျ ရပွီးမှ အပြိုဘဝတုနျးက ရညျးစားဟောငျးနဲ့အတူတူနခေဲ့တဲ့ video ဖိုငျတှေ laptopကနတေဆငျ့ပွနျ့ပွီး အိမျထောငျရေးကှဲသှားခဲ့တာ တကယျလကျတှပေ့ါ။အတုမယူသငျ့တာတော့ အတုမယူပါနဲ့ညီမတို့
(နောကျတဈတဈခု အှနျလိုငျးမှာ statusတငျရငျလညျး စောကျဘာဖွဈ စောကျညာဖွဈတယျ ။ အဲလို စောကျတှထေညျ့ထညျ့ပွီး ရိုငျးတာတှေ မတငျကဖြို့လညျး တောငျးဆိုပါတယျ။ကိုယျဟာကိုယျ ဘာထငျနလေဲတော့မသိပါ။ အမြားအမွငျမှာ အရမျးရိုငျးတဲ့မိနျးမဆိုတာတော့ လူတိုငျးအထငျသေးသှားတတျကွပါတယျ။)
မိနျးမတဈယောကျရဲ့တနျဖိုးဆိုတာ လှတာ ခမျြးသာတာကို ပွောတာ မဟူတျပါဘူး ။ အပြိုစငျ ဘဝကိုပွောထားတာပါ
သလေောကျအောငျလှနပေါစေ လကျမထပျသေးပဲ အအိုဖွဈသှားရငျမိနျးမတနျဖိုးက ကသြှားပွီဆိုတာ သတိရှိကွပါ ညီမငယျတို့living together ( လကျမထပျသေးပဲ အတူတူနခွေငျး) ဘဝမှာ ဆငျခငျြနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးပါတယျ။
အအိုဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဖတ်ရင် ရင်ထုမနာဖြစ်မှာစိုးလို့အပျိုစစ်စစ် မိန်းခလေးများသာဖတ်ရန်
ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြာဘူး living together က နေနေကြပြီလေတကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီအပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့ တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို့တောင် တင်စားထားကြပါတယ်။အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး
ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့က ရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူးချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကိုထိန်းသိမ်းပါ။ ချစ်သူကို နားလည်အောင် သူသဘောပေါက်အောင် ပြောပြထားပါ။ ဒါမှ သူဘက်က လက်မခံဘူး ။
စိတ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရဲရဲကြီးသာ လမ်းခွဲလိုက်ပါ။သူ တကယ်ချစ်တာမဟုတ်တာသေချာနေပါပြီ။သေလောက်အောင်ချစ်နေပါစေ အပျိုစင် ဘဝကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။ဘဝမှာ ရည်းစားဦးနဲ့လွဲကျတာ ၁၀၀မှာ ၉၀ အထိ ရှိထားတာပါ။ ရည်းစားဦးကတည်းက အပျိုစင်ဘဝကို ပေးထားခဲ့လို့။
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သူနဲ့များလွဲသွားခဲ့ရင်နောင်တွင် ကိုယ်နဲ့တကယ်လက်တွဲရမယ့် ယောင်္ကျားနဲ့တွေ့မှာ အကြီးကြီးနောင်တရပါလိမ့်မယ် ။ အဲကျမှတော့နောင်တရပါတယ်လို့သိသွားလည်းနောက်ကျသွားပါပြီ။အခန့်မသင့်ရင် အိမ်ထောင်ရေပြသာနာတွေတောသ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်မှာ အိမ်ထာင်ကျပြီးလို့ကလေးတောင် ၃ယောက် ရပြီးမှ အပျိုဘဝတုန်းက ရည်းစားဟောင်းနဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့ video ဖိုင်တွေ laptopကနေတဆင့်ပြန့်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးကွဲသွားခဲ့တာ တကယ်လက်တွေ့ပါ။အတုမယူသင့်တာတော့ အတုမယူပါနဲ့ညီမတို့
(နောက်တစ်တစ်ခု အွန်လိုင်းမှာ statusတင်ရင်လည်း စောက်ဘာဖြစ် စောက်ညာဖြစ်တယ် ။ အဲလို စောက်တွေထည့်ထည့်ပြီး ရိုင်းတာတွေ မတင်ကျဖို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ကိုယ်ဟာကိုယ် ဘာထင်နေလဲတော့မသိပါ။ အများအမြင်မှာ အရမ်းရိုင်းတဲ့မိန်းမဆိုတာတော့ လူတိုင်းအထင်သေးသွားတတ်ကြပါတယ်။)
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာ လှတာ ချမ်းသာတာကို ပြောတာ မဟူတ်ပါဘူး ။ အပျိုစင် ဘဝကိုပြောထားတာပါ
သေလောက်အောင်လှနေပါစေ လက်မထပ်သေးပဲ အအိုဖြစ်သွားရင်မိန်းမတန်ဖိုးက ကျသွားပြီဆိုတာ သတိရှိကြပါ ညီမငယ်တို့living together ( လက်မထပ်သေးပဲ အတူတူနေခြင်း) ဘဝမှာ ဆင်ချင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အပျိုဘဝကိုတန်ဖိုးရှိစေချင်တယ်ဆို shareလေးလုပ်ပြီး အများသိအောင်ကူညီစေချင်ပါတယ်…။
ဘဝမှာ အရှယျရောကျ လာပါပွီတဲ့
ရာသီ ကလာပွီ ၊ ထိနျးရပွီ ၊သိမျးရပွီ ၊ ဂရုစိုကျရပွီ
လှမျးရပွနျပွီ၊ ဆှေးရပွနျပွီ ၊ ကွကှေဲရပွနျပွီ ၊ ခံစားရပွနျပွီ
မိဘ ၊ မောငျနှမတှနေဲ့ ခှဲရပွနျပွီ ၊ ငိုရပွနျပွီ
ယောကျြားလညျး ထိနျးရ ၊ အိမျကိုလညျး သိမျးရ
ယောက်ခမ ကိုလညျး ဂရုစိုကျပေးရ ၊
သားသမီးတှကေိုလညျး သှနျသငျပေးရ ၊
ခန်ဓာကိုယျက ယောကျြား အတှကျ
အခြိနျတှကေ သားသမီး အတှကျ
သတိရနတေဲ့ စိတျက မိဘ အတှကျ
ပငျပနျး နှမျးနယျမှု နဲ့ အိုမငျးရငျ့ရျောမှု တှသော
မိနျးကလေး တဈဘဝ လှယျတာမှတျလို့
မိဘအရိပျအောကျမှာ နတေဲ့ တဈလြှောကျ မငျးသမီးလေး လိုနရေတယျ
မင်ျဂလာ ဆောငျတဲ့ တဈရကျ ဘုရငျမ လိုနရေတယျ
အိမျထောငျကပြွီးတဲ့ တဈသကျ အစခေံ လိုနရေတယျ
ငါ့ မိဘ အပျေါ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ဆကျဆံပါ
သူတို့ခမြာ ငါ့ကို ကွီးပွငျးလာအောငျ ကြှေးမှေးလာတာ
အဖေ အမေ သား မိနျးမ ကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ဆကျဆံပါ
သူ့ခမြာ ပငျပနျးရှာတာ လို့
ပွောဖို့ကွတော့ သတိရမိတတျ ရဲ့လား?
မိနျးမသား တဈယောကျ ဖွဈရတာ မလှယျပါဘူး
သားကောငျးယောကျြား မြား မိနျးမသား ဘဝကို
ဘဝမှာ အရွယ်ရောက် လာပါပြီတဲ့
ရာသီ ကလာပြီ ၊ ထိန်းရပြီ ၊သိမ်းရပြီ ၊ ဂရုစိုက်ရပြီ
လွမ်းရပြန်ပြီ၊ ဆွေးရပြန်ပြီ ၊ ကြေကွဲရပြန်ပြီ ၊ ခံစားရပြန်ပြီ
မိဘ ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ခွဲရပြန်ပြီ ၊ ငိုရပြန်ပြီ
ယောက်ျားလည်း ထိန်းရ ၊ အိမ်ကိုလည်း သိမ်းရ
ယောက္ခမ ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးရ ၊
သားသမီးတွေကိုလည်း သွန်သင်ပေးရ ၊
ခန္ဓာကိုယ်က ယောက်ျား အတွက်
အချိန်တွေက သားသမီး အတွက်
သတိရနေတဲ့ စိတ်က မိဘ အတွက်
ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှု နဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်မှု တွေသာ
မိန်းကလေး တစ်ဘဝ လွယ်တာမှတ်လို့
မိဘအရိပ်အောက်မှာ နေတဲ့ တစ်လျှောက် မင်းသမီးလေး လိုနေရတယ်
မင်္ဂလာ ဆောင်တဲ့ တစ်ရက် ဘုရင်မ လိုနေရတယ်
အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ တစ်သက် အစေခံ လိုနေရတယ်
ငါ့ မိဘ အပေါ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပါ
သူတို့ခမျာ ငါ့ကို ကြီးပြင်းလာအောင် ကျွေးမွေးလာတာ
အဖေ အမေ သား မိန်းမ ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပါ
သူ့ခမျာ ပင်ပန်းရှာတာ လို့
ပြောဖို့ကြတော့ သတိရမိတတ် ရဲ့လား?
မိန်းမသား တစ်ယောက် ဖြစ်ရတာ မလွယ်ပါဘူး
သားကောင်းယောက်ျား များ မိန်းမသား ဘဝကို
Categories Knowledge, Love Leaveacomment
January 11, 2022 by Zaw Hein
သငျ့ခဈြသူက ဒီအခကျြတှကေို လုပျနပွေီဆိုရငျတော့ သခြောပါပွီ သူသငျ့ကို မခဈြတော့ပါဘူး …။
မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ရညျးစားတှေ ပွောငျးလဲသှားရငျ ခံစားရပါတယျ။သူတို့ကို မခဈြတော့ဘူးလို့ သိလိုကျရတဲ့အခါ အတျောကို ထိခိုကျခံစားရပါတယျ။မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ကို ပြျောရှငျစမေယျ့သူ၊ အမွဲဂရုစိုကျပေးမယျ့သူကိုပဲ လိုခငျြကွပါတယျ …။အလုပျတှေ ဘယျလိုပဲမြားမြား၊ ဘယျလိုပဲအရေးကွီးကွီး ယောကျြားလေးတှဘေကျက ဂရုစိုကျရမယျ၊ဦးစားပေးရမယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သငျ့ခဈြသူက ဒီအခကျြတှထေဲက တဈခကျြကို လုပျနပွေီဆိုရငျတော့ သငျ့ကိုမခဈြတော့ဘူးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ …။ပွောငျးလဲတယျဆိုတာ သဘာဝနိယာမပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အရာရာပွောငျးလဲသှားတာကို လူတှေ မကွိုကျကွပါဘူး။ခဈြသူရညျးစားတှဆေိုရငျ ပွောငျးလဲတာကို ပိုတောငျမကွိုကျကွပါဘူး။ မိနျးကလေးတှမှော ဆဌမအာရုံရှိတယျလို့ ယုံကွညျကွပါတယျ …။
အဲဒါကွောငျ့ သူတိူ့ခဈြရသူရဲ့ အပွုအမူပွောငျးလဲတာတှကေို ခကျြခငျြးပဲ အဖွရှောကွပါတယျ။ဒီလိုပွောငျးလဲမှုတှေ ရှိလာရငျတော့ မခဈြဘူးလို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။ ဘယျလိုပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈမလဲ။ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျနျော …။
သကွားမြားရငျ အရသာပကျြပါတယျ။ Relationship မှာလညျး အဲဒီလိုပါပဲ။
သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို ပိုဂရုစိုကျပွမယျ၊ ပိုခဈြပွမယျ၊ ပိုပွီးသညျးသညျးလှုပျပွမယျ ဆိုရငျတော့ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ လက်ခဏာဆိုတာ သခြောပါပွီနျော …။
သငျ့ခဈြသူက သငျဖုနျးစချေါတာကိုပဲ နာရီပေါငျးမြားစှာ စောငျ့နတေတျသူလား။ သငျဖုနျးချေါလာတာကို စပွီး ရှောငျနပွေီလား။
ဒီအခကျြတှေ စလုပျပွီဆိုရငျတော့ သငျ့ခဈြသူကို စဈဆေးဖို့လိုလာပါပွီ။သငျ့ကိုလဈြလြူးရှုတယျဆိုတာ သူ့မှာ ပိုအရေးကွီးတဲ့သူ ရှိနပွေီဆိုတဲ့ လက်ခဏာပါပဲ …။
တခြို့အရာတှကေို သငျ့ကို မပွောပွဘဲ ဖုံးကှယျထားပါလိမျ့မယျ။
ဖုံးကှယျထားတဲ့ အရာတှကေို သငျသိသှားပွီး လုံးဝခှငျ့လှတျလို့မရတဲ့အခါမှ ပွောပွပါလိမျ့မယျ။သငျ့ကို ဖုံးကှယျထားတာတှေ ရှိပွီဆိုကတညျးက မခဈြတော့တာပါ။Relationship ဆိုတာ ယုံကွညျမှုနဲ့ တညျဆောကျရတာပါ။ သငျ့ခဈြသူက ဖုံးကှယျတတျလာရငျတော့ မယုံပါနဲ့တော့ …။
ဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနရေငျတော့ သငျတို့အခဈြတှကေ တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ မှေးမှိနျ ပြောကျကှယျသှားပါပွီ …။ ။
သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေကို လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ သူသင့်ကို မချစ်တော့ပါဘူး …။
မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရည်းစားတွေ ပြောင်းလဲသွားရင် ခံစားရပါတယ်။သူတို့ကို မချစ်တော့ဘူးလို့ သိလိုက်ရတဲ့အခါ အတော်ကို ထိခိုက်ခံစားရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေမယ့်သူ၊ အမြဲဂရုစိုက်ပေးမယ့်သူကိုပဲ လိုချင်ကြပါတယ် …။အလုပ်တွေ ဘယ်လိုပဲများများ၊ ဘယ်လိုပဲအရေးကြီးကြီး ယောက်ျားလေးတွေဘက်က ဂရုစိုက်ရမယ်၊ဦးစားပေးရမယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ကို လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ် …။ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ သဘာဝနိယာမပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရာရာပြောင်းလဲသွားတာကို လူတွေ မကြိုက်ကြပါဘူး။ချစ်သူရည်းစားတွေဆိုရင် ပြောင်းလဲတာကို ပိုတောင်မကြိုက်ကြပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေမှာ ဆဌမအာရုံရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ် …။
အဲဒါကြောင့် သူတိူ့ချစ်ရသူရဲ့ အပြုအမူပြောင်းလဲတာတွေကို ချက်ချင်းပဲ အဖြေရှာကြပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာရင်တော့ မချစ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်မလဲ။ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် …။
သကြားများရင် အရသာပျက်ပါတယ်။ Relationship မှာလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို ပိုဂရုစိုက်ပြမယ်၊ ပိုချစ်ပြမယ်၊ ပိုပြီးသည်းသည်းလှုပ်ပြမယ် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာဆိုတာ သေချာပါပြီနော် …။
သင့်ချစ်သူက သင်ဖုန်းစခေါ်တာကိုပဲ နာရီပေါင်းများစွာ စောင့်နေတတ်သူလား။ သင်ဖုန်းခေါ်လာတာကို စပြီး ရှောင်နေပြီလား။
ဒီအချက်တွေ စလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူကို စစ်ဆေးဖို့လိုလာပါပြီ။သင့်ကိုလျစ်လျူးရှုတယ်ဆိုတာ သူ့မှာ ပိုအရေးကြီးတဲ့သူ ရှိနေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ …။
တချို့အရာတွေကို သင့်ကို မပြောပြဘဲ ဖုံးကွယ်ထားပါလိမ့်မယ်။
ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အရာတွေကို သင်သိသွားပြီး လုံးဝခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့အခါမှ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။သင့်ကို ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ ရှိပြီဆိုကတည်းက မချစ်တော့တာပါ။Relationship ဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ရတာပါ။ သင့်ချစ်သူက ဖုံးကွယ်တတ်လာရင်တော့ မယုံပါနဲ့တော့ …။
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်တို့အချစ်တွေက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ …။ ။